Burmese Articles - Page2- Results from #15
Myanmar Water Portal has published around 40 translation articles throughout 2020. We would like to give credit to our translation community members for all of their great effort in each article. We are grateful for the contributions of our translators and our readers. We hope that by these translat...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် လာမည့်ကာလများ၌ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည့် သင်တန်းများ၌ကောင်းမွန်တိုးတက်သော သင်ကြားနည်းစနစ်များအသုံးချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာ ဌာနမှ အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်နေကြပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှစ၍ The Water Agency၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် VU Amsterdam တက္ကသိုလ...
သန့်ရှင်းသောရေကို ရရှိအသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရရှိအသုံးပြုနိုင်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ထိရောက်သော‌ရေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီနိုင်ပေလိမ့်မည်။ ကိုဗစ...
Dotehtawady River Fishery Department #datacollection_analysis Bago Disaster Risk Reduction Climate Change Flooding WASH Plastic Pollution Twante Canal